प्रतिवेदन दवाउन राष्ट्रिय सहमति
राजनीतिक दलहरू इच्छुक भएका भए त बितेका आठ वर्षभरिमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ का लागि सबै कानूनी व्यवस्था भइसक्ने थियो । अझै पनि समय छ । अब हुने तीन तहको निर्वाचनमा...
एमाले विभाजनको तुस र एमसीसी
खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दलहरुसँग परामर्श गर्ने जिम्मेवारी पाएपनि अन्तत ओलीसँग भेटघाट नै नहुने प्रवल सम्भावना देखिन्छ । एमाले समाजवादीको अस्तित्व नै स्वीकार गर्न तयार नभएका ओलीले कसरी झलनाथ खनालको टिमसँग...
‘दृश्य टिभी’ मा स्वागतम्
हाम्रो टिम लोकतन्त्र र विधिको शासनमा विश्वास गर्दछ । जनताको अधिकारको प्रवध्र्दन, रक्षा र हितमा काम गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठान्दछ । जनतासँग सिधा सम्बन्ध नभएको पत्रकारिता रहर मात्र हो ।...
न्यायालय विवादमा राष्ट्रपतिको अर्थपूर्ण मौनता !
तत्कालिन सत्तारुढ दल नेकपा र पछि नेकपा एमालेमा विवाद चर्किंदा सक्रिय रुपमा अघि सरेकी राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारी यतिबेला किन मौनता साँधेर बसिरहेकी छन् भनेर प्रश्न उठ्नु अस्वाभावाविक पनि होईन ।...
प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्न असंवैधानिक संयन्त्र !
लोकतन्त्रको संस्थागत बिकास गर्दै अघि बढ्ने कि यसलाई उपयोग गर्दै अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई बढावा दिँदै जाने भन्ने कुरामा सत्तारुढ दल, विपक्षी दलहरु, विज्ञ वुध्दिजीवी, पेशाकर्मी र मिडियाले समेत चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था...
२०४६ सालको आन्दोलन चर्किएपछि तात्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई आत्मबोध भयो, प्रजातन्त्रबिनाको राजतन्त्र असान्दर्भिक भयो । राजा वीरेन्द्रले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षमा आफुलाई उभ्याए । काँग्रेस नेता गणेशमान सिंह,...
विधि हुर्काउने कि अधिनायकवाद ?
विधिविपरित बलको दवाव र प्रभावमा न्यायिक निकायको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने चाहना कदापि पनि लोकतान्त्रिक सोचको परिणाम हुनसक्दैन । यो केवल देशमा अधिनायकवाद सर्वसत्ता थोपर्न चाहना भएका शक्तिहरुको सोचको उपजमात्र हुनसक्दछ...